Ọdịnihu UNWTO nke Saudi Arabia na Spain mebere: Ụbọchị Ọhụrụ maka njem nlegharị anya mba ụwa malitere na FII
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ọdịnihu UNWTO nke Saudi Arabia na Spain mebere: Ụbọchị Ọhụrụ maka njem nlegharị anya mba ụwa malitere na FII
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • trending Ugbu a • WTN
Mgbake njem nlegharị anya ga-ewe oge na mbọ a haziri ahazi. Ọ ga-ewe mmekorita nke mba ụwa na nhazi multilateral nyere ike. Taa, Saudi Arabia na Spain bịara na tebụl na nkwekọrịta nke nwere ike ịkpụzi ọdịnihu njem njem na UNWTO.
Saudi Arabia na Spain jikọtara ndị agha imeghari njem nlegharị anya post-COVID gụnyere site na UNWTO.
HE Ahmed Al Khateeb - Minister nke njem nlegharị anya, Alaeze nke Saudi Arabia.
HE Maria Reyes Maroto - Minista nke ụlọ ọrụ, ahia na njem nlegharị anya, Alaeze Spain.
The Initiative itinye ego n'ọdịnihu (FII) na Saudi Arabia mere taa na ndị isi ego 6,000 na-aga.
Ụlọ ọrụ FII bụ ntọala anaghị akwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ nke nwere ogwe aka itinye ego na otu atụmatụ: Mmetụta na Humanity. Ejikọtara ya na ụkpụrụ ESG, ọ na-akwalite echiche ndị na-egbuke egbuke ma gbanwee echiche n'ime ihe ngwọta n'ezie na mpaghara 5 na-elekwasị anya: AI na Robotics, Education, Healthcare, and Sustainability.
Maka oge mbụ, njem na njem nlegharị anya bụ ihe ọzọ na-elekwasị anya ma were nnukwu ọrụ na Saudi Arabia a kwadoro ogbako zuru ụwa ọnụ. Ndị isi 150 kachasị elu na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na-abịa, gụnyere ihe karịrị ndị ozi 10 nọ ọdụ.
UNWTO tụfuru ntụkwasị obi na mkpa kemgbe 2018. Ọ bụ ezie na odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvil kwadoro ihe omume nke ya na Barcelona kpachapụrụ anya n'otu ụbọchị ahụ na ikere òkè na-adịghị ike, ndị isi Saudi Arabia gbakọtara iji mee ka ọdịnihu nke UNWTO.
Nsonaazụ bụ nkwekọrịta na Saudi Arabia na Spain ijikọ ndị agha imegharị njem nlegharị anya post-COVID gụnyere site na UNWTO.
Ọ bụ ya bịanyere aka na nkwekọrịta a Ọ bụ Ahmed Al Khateeb nke Saudi Arabia na Ọ bụ Maria Reyes Maroto nke Spain. UNWTO nwere isi ụlọ ọrụ ya na Madrid. Nkwekọrịta a na-emekwa ka asịrị banyere Saudi Arabia na-achọ ịkwaga isi ụlọ ọrụ UNWTO na Riyadh. Saudi Arabia ugbu a bụ otu ndị otu dị njikere ibute ụzọ iji mepụta ọdịnihu njem nlegharị anya ụwa na nzukọ dị n'azụ ya - UNWTO.
Nkwupụta nkwonkwo nke Saudi Arabia na Spain
1. Anyị enweela ezigbo nzukọ na-arụ ọrụ nke ọma taa na njedebe nke Future Investment Intiative na Riyadh, ebe anyị achọpụtala ọtụtụ ubi nke Spain na Saudi Arabia nwere ike ịrụ ọrụ na-ebute ụzọ iji mee ka mpaghara njem nleta maliteghachi mgbe ọrịa ahụ gasịrị, maka ọ ga-abụ otu n'ime ogidi mgbake akụ na ụba ụwa. Ngalaba njem nlegharị anya chọrọ nduzi siri ike na nhazi iji mee ka gọọmentị na ndị mmekọ nkeonwe ọnụ na-arụkọ ọrụ ọnụ karịa. Anyị kwesịrị iwulite mpaghara njem nlegharị anya na-adịgide adịgide, na-adigide na nke na-enye ọganihu maka ogologo oge.
2. Saudi Arabia nwere ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-eduga n'inye nhazi nke mba ụwa maka mpaghara ahụ, malite na onyeisi oche nke G20 na 2020. Alaeze ahụ ejirila ọtụtụ atụmatụ dị mkpa wuo na nke a gụnyere onyinye $ 100 nde nye ụwa. Bank for the Tourism Community Initiative, mmemme obodo kacha mma, yana mmekorita ya na UNWTO, na ugbu a Sustainable Tourism Global Center. Saudi Arabia na ndị mmekọ mba ụwa na-arụkọ ọrụ iji wuo mmemme nke na-achọ imezigharị ọdịnihu njem nlegharị anya ma dozie nsogbu ndị dị n'okpuru na-eche ụlọ ọrụ ahụ ihu.
3. N'oge ọgba aghara COVID, Spain anọwo na mbụ na mbọ mba ụwa iji weghachi mmegharị ahụ ebe ọ bụbu onye nabatara Asambodo Digital Digital EU. Spain bụ obodo nke abụọ a kacha eleta n'ụwa, ebe ọ natara ndị ọbịa mba ụwa nde 83.7 na 2019. A ma ama ya ebe ebe ọ na-aga na akụrụngwa ya na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa. Spain bụ onye ndu ụwa na njem nlegharị anya, onye guzobere UNWTO, ma ọ na-etinye ego ugbu a na ụlọ ọhụrụ nke ga-edobe isi ụlọ ọrụ nke nzukọ a.
4. Mba abụọ ahụ kwetara ime ka mmekorita ha dịkwuo elu n'okwu atọ dị mkpa iji zụlite njem nlegharị anya: nke mbụ, ịkwalite nkwado, nke ga-adị mkpa iji kwe nkwa na ọ ga-eme n'ọdịnihu dị ka ngalaba na-eto eto na ntinye aka na akụ na ụba ụwa nke decarbonized, na ịkwalite mmekọrịta ọha na eze n'ime ndị ọbịa. obodo. Nke abụọ, imekọ ihe ọnụ na mgbanwe dijitalụ, na-ewu ebe ndị mara mma na nke jikọtara ọnụ, na-ebuli usoro na mgbanwe nke ozi na nghọta iji mee ka mgbanwe nke ngalaba njem nlegharị anya dịkwuo elu. Nke atọ, Spain na Saudi Arabia ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji kwalite na ịzụlite ọzụzụ ndị ọrụ mmadụ iji wusie ike nke ndị na-arụ ọrụ na ngalaba a, site na ọzụzụ ọrụ aka ruo n'ọmụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ọkachamara.
5. Njem nlegharị anya bụ ngalaba dị mkpa zuru ụwa ọnụ. Na nkwekọrịta nke taa ga-eme ka mmadụ abụọ n'ime ndị isi ngalaba ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ karịa maka ọdịmma ndị niile na-adabere na ya.